आफ्नैबाट बच्न अप्ठ्यारो ! | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / आफ्नैबाट बच्न अप्ठ्यारो !
आफ्नैबाट बच्न अप्ठ्यारो !
Posted by: युगबोध in विचार July 11, 2018	0 132 Views
अहंकारी बादशाहलाई नाङ्गै बनाएर बजार परिक्रमा गराउने दुष्प्रयास त गरिदै छै न कतै ? महत्वाकांक्षामा मलजल गरे र हुर्काएकाहरुले नै प्रशंसाले पुरे र पातालतिर धसाउन खो जे का त है नन् ? शंका गर्नुपनेर् अवस्था आएजस्तो छ ।
डा. गो विन्द के सीको आमरण अनसनका मागहरु कुनै प्रतिक्रियावादीका है नन्, जनबिरो धी पनि छै नन् । ती माग पूरा गर्दा सरकारको मान प्रतिष्ठा गुम्दै न । तर पनि मान्नु हु“दै न भने र प्रधानमन्त्री ओ लीलाई उकास् ने हरुले यो सरकारको दीर्घायु चाहे का हुन् कि दुर्घटना ? बुझ्न गाह्रो भएको छ । माइतीघर मण्डलालाई निषे धित क्षे त्र तो क्न लगाउने ले पनि यो सरकारको लो कप्रियता हे र्न चाहे का हुन् कि बदनामी ? संस् कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको एउटा विदे श यात्रा रो क्न लगाएर बहादुरी गरे को मा स् याबासी खो ज्ने हरुले पनि यो सरकारलाई विवादरहित बनाउन खो जे का हुन् कि विवादमा तान्न ? जान्न चाहने लाई जवाफ कसले दिने ?
‘ने पाल भारतको लागि एक चुनौ ती भएको छ । तर यो स् िथति मुख्यरुपमा भारत आफै ले सिर्जना गरे को हो  । सन् २००० को दशकको मध्यदे खि यताको अवधिमा भारतले गरे का तीन महाभूल नै भारतको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपनेर् कदम हुन पुगे का छन् । पहिलो , संवै धानिक राजतन्त्रलाई हटाउने कुरामा लागिमे ली गर्नु । दो स्रो , भूमिगत रहे का माओ वादीलाई बाहिर ल्याएर ने पाली राजनीतिको के न्द्रबिन्दुमा राख्ने कुरामा सघाउनु । ते स्रो , तराईका बासिन्दा (मधे शी) लाई सन् २०१५ मा तर्जुमा भएको संविधानबिरुद्ध पहिले भड्काउनु र पछि तिनलाई बे वारिस छो डिदिनु र अझ उल्टो त्यही त्रुटियुक्त भनिएको संविधान मातहतको चुनावमा भाग लिन दबाब दिनु ।
वास् तवमा नया“ दिल्लीले विगतमा आफूले गरे का हस् तक्षे पकारी कामको लागि ने पालका नागरिकहरुसित क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । यथार्थमा ती हस् तक्षे पका अनुमान नगरिएका परिणाम आए र उल्टो भारतकै हितमा आघात हुन गयो  । भारतको गल्तीले नै ने पालमा भारतको सकारात्मक प्रभाव पनि स् खलित भयो र त्यही मे सो मा चीनले ने पालमा आफ्नो उपस् िथतिलाई टड्कारो पादैर् लग्न पायो  ।’ ब्रह्म चे लानी÷६ जुलाई ०१८, हिन्दुस् तान टाइम्स (असार २४ को लो कान्तरमा प्रकाशित अनुवाद) ।
ने पालमा वामपन्थी ने तृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकार बने पछि पछुताएर समीक्षा गरिदै छ भारतमा । युरो प र अमे रिकी शक्ति भारतीय घो डा चढे र, यता आएर जुन हर्कत गदैर् थिए, पुनरावलो कन हु“दै छ त्यसमा पनि । नया“ शै ली र तरीका अपनाएर के ही शक्ति र व्यक्तिलाई सरकारभित्रै र बाहिर राखे र बदनाम गराउने काम हु“दै गएका पनि हुनसक्छन् दू्रत गतिमा । मन्त्री महासे ठका क्रियाकलाप र सञ्चार मन्त्रीका बो लीमा अपनत्व हो ला । भावना पनि पवित्र हो ला । तर खे ल्ने मौ का दिए र बदनाम पनि गराएकै छन् । दृढनिश्चयी र हठी स् वभावका सन्त डा. गो विन्द के सीको दुरुपयो ग पनि गरिएको हुनसक्छ उनै ले थाहा नपाउने गरी । डा. के सीलाई आफ्नो त्याग, निष्ठा, सत्य र इमानदारिप्रतिको समर्पणले हठी बनाएको ले झुक्न गाह्रो भएको छ । सरकारमा पनि दुईतिहाई जनमतको दम्भ छ, टे दैर् न त्यसै ले  ।
आ–आफ्ना ठाउ“मा ठीक हो लान् दुबै का हठ । तर एउटाको अवशानमा अकोर् ले उत्थान मान्ने हो भने दुर्दिनको शुरुवात हुने छ यसै बाट । उचाल्ने र पछानेर् हरु लागे का हुनसक्छन् दुबै तिर । बाहिर रहे र गरे का विरो धभन्दा भित्रै सम्म पुगे र उचालिएका आकांक्षा झन् धे रै खतरनाक सावित हुनसक्छन् !
‘विरो धीस“ग मुकाबिला गर्न म एक्लै सक्षम छु, हे भगवान् मलाई मे रा आफ्नै बाट बचाऊ †’ भन्नुपनेर् अवस् थामा पु¥याइएका हुनसक्छन् ओ ली अहिले  । भो लि के हो ला भन्ने तिर पटक्कै सो चिएको छै न । अनि उनले जस् ता महत्वाकांक्षी यो जना ल्याउ“दा पनि हो हजुर, हुन्छ, भै हाल्छ भन्दै जम्लाहात जो रे र जयजयकार गनेर् ले बिगारे  । ओ ली वरिपरिको जमातले राम्रो र जस पाउने कामतिर भन्दा नराम्रो र विवाद बढ्ने , अपजस आउने , बदनाम गराउने विषयमा हातहाल्न लगाउनु रहस् यमय छ । पॉच÷दश वर्षपछिका पानीजहाज र रे लका मामिलामा अहिले उफारे र काठमाडांै का सडकमा जमे को पानी तर्काउनबाट पनि टाढा पु¥याए । जनताका दै निक समस् या समाधान गरे र स् याबासी लिनुभन्दा टाढाका कुरा उराल्न लगाएर वाहवाही गनेर् जमातले कति टाढासम्म साथ दे लान् ? गणे श प्रबृत्तिका स् वार्थी प्रशंसक एवं आधुनिक हनुमानहरुले यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री हु“दा ओ लीले काभ्रे मा र राष्ट्रपतिले गो र्खामा निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरे का भूकम्प पीडितका घर बनाउन मात्र सघाएका भए पनि हुन्थ्यो नि † त्यति पनि नगरे को जमातबाट अरु धे रै कति आश गनेर् हो कुन्नि ?
वामपन्थीहरुको अपार बहुमतको सरकारले राम्रो काम गरे को दे ख्न पाइयो स् र कम्युनिष्टहरुले यी यसरी जनताको भलो गर्छन् भने र ले ख्न पाइयो स् भन्ने कामना पनि पूरा नहुने भो यो एकबारको जुनिमा । आश लागे का ने ताका गास र बास माफिया र तस् करका मझे रीमा हुन थाले पछि सर्वनाश हुन लागे को हो भनिदै छ । त्यो एकछाकको मार्सीको भात यति महंगो पर्ला भन्ने कुराको अनुमान हनुमानहरुले पहिल्यै लगाएका भए नाजवाफ हुनुपनेर् थिएन आज । मार्सी चामलको भात ख्वाएर पचे पछि शीर्ष ने ताद्वयका मलद्वारबाट मल है न, मालै माल झर्छ भने र कुरे काहरु अहिले थाप्ने भा“डो खो ज्न कता दगुरे का हो लान् ? फे सबुकमा त्यो फो टो राख्ने ले गुन गरे कि बै गुन ?
कांग्रे सको विरो धमा कुनै दम थिएन । सरकारकै कमजो री र लापरवाहीले सञ्जीवनी बुटि पाएजस् तो भएको छ । थला परे को कांग्रे स जुरुक्क उठे र जुर्मुराएको छ, बुरुक् बुरुक् गदैर् छ । उकालो लाग्नुपनेर् सरकार ओ रालो झदै ैर् छ । मलामीलाई दे खे र खुशी मनाउनु कि दुःखी हुनु ? समस् या परे को छ छे उ किनारका शुभचिन्तकलाई पनि । सत्तान्धता र भत्तान्धताले मदो न्मत्त भएकाहरुले दे खे पो , बुझे पो .. !
यो सरकारले जति गल्ती र कमजो री गर्छ, कांग्रे स र पञ्चसहितका अरु प्रतिक्रियावादीहरुलाई उति सत्र पर्छ । विरो धीलाई सत्र, शुभे च्छुक र समर्थक जनसमूहलाई अलपत्र पानेर् काममा कसले प्रो त्साहित गरिरहे को छ ? हटाइएको सिण्डिके टको पुनःस् थापना, ठग ठे के दारहरुलाई छूट, अराजकतालाई प्रो त्साहन गनेर् र समाजमा विष छनेर् स् वदे शी तथा विदे शी दातृ निकाय वा गै रसरकारी संस् थालाई साथ, शिक्षा र स् वास् थ्य क्षे त्रका माफियालाई मनपरी गर्न दिएर कसरी आउ“छ समाजवाद र हुन्छ समृद्धि ? शक्तिके न्द्रका ती सबै संयन्त्रले कहा“, कसलाई, कसरी प्रभावमा पारे पछि आफ्ना काम फत्ते गर्न सकिन्छ भने र यो जनाबद्ध तरीकाले सियो बने र छिर्छन् र मुसल बने र निस्कन्छन् । सरकारी अस् पतालको बे हाल र निजी नर्सिङ् हो म मालामाल त्यसै भएको है न, छै न । सरकारी विद्यालय रित्तै र निजी बो र्डिङ् स् कूल भरिभराउ, सरकारी कार्यालयका से वा असफल र गै रसरकारी संस् थाका से वा सफल भन्ने अवस् था त्यसै आएको है न । माथिका के ही थान मूलीलाई खुशी पारे र तलका सबै आत्मनिर्भरमुखी संरचना, शै ली, सभ्यता, संस्कृति, परम्परालाई सखाप पारे र परनिर्भरमुखी बनाए जताततै  । दे श खो क्रो भयो , पारियो  । बो क्रो मात्र बा“की छ । यसै लाई पनि सिध्याउनका लागि लादिएको संघीयता र धर्मनिरपे क्षताले राम्रै प्रभाव दे खाउदै छ । मन्त्री, सांसद र मे यरलाई बै ठक, भ्रमण र यातायात भत्ता बढाउन बजे ट पुग्ने , जनतालाई सुविधा दिन नपुग्ने भएपछि कति दिन टिक्ला र ?
जुन पालिका वा जस् तो कार्यालयमा पुगे पनि बिनादस् तुर जनताका काम हुनै छाडे  । हिजो १०।– रुपिया“मा हुने कामलाई आज १००।– रुपियाले पनि हुदै न, पुग्दै न । सिफारिसका लागि समे त ५००।– लाग्छ । यस् तो अवस् थाले कतिदिन चल्छ ? गाउ पालिकाको वडासदस् यदे खि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म पाल्नपनेर् जनताले , जनतालाई पाल्न नपनेर् तीनपत्रे सरकारले † यस् तो व्यवस् था पनि कहीं हुन्छ ? तर हाम्रो ने पालमा मात्रै हुन्छ र छ । व्यवस् थाका सबै अङ्गमा पुगे का प्रतिनिधिहरु पनि सबै आफ्नै हुन् । तिनै स“ग सतर्क हुनपनेर् अवस् था आयो हजुर !
Previous: यसरी ठगिन्छौ उपभोक्ता
Next: सडक निर्माणमा समय र गुणस्तरको सवाल